LACAGTAYDA ILA AASA | Berberanews.com
Home QORMOOYIN LACAGTAYDA ILA AASA
LACAGTAYDA ILA AASA
Waxa jiri jiray Nin aad u dhabcaal ahaa (bakhayl ) aadna u lacag jeclaa , noloshiisii oo dhanaa wuxuu ku qaatay lacag ururin, berigii danbe ayuu gaboobay oo xanuunsaday , isaga oo sakaraad ah ayuu xaaskiisii la sii dardaarmay , wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaan kula inaan kula sii dardaarmo iina ballan qaadin inaad fuliso arinkan aan kuu sheegi doono , oo ah haddii aan dhinto waxaan doonayaa in aad lacagtayda oo dhan ila xabaasho , oo iilka laygula rido , si aan aakhiro ugu qaato .
Xaaskiisii way u ballan qaaday inay dardaarankiisa u fuliso . Laba casho kadib ayuu odaygii dhintay (geeriyooday) , Markii la kanfay ee la damcay in laqaado suga , inta ay ag-fadhiisatay maydkii ayay kafantii meel ka dilaacisay , oo ay gelisay sanduuq yar , kadibna qaada ayay tidhi .
Saaxiibadeed ayaa waxay waydiisay : Naa ma dardaarankiisii baad fulinaysay , oo lacagtii oo dhan baad kafantiisa meel ka gelisay ?
Waxay ugu jawaabtay : haayoo dee waan u ballan qaaday , oo dardaarankiisii waa inaan u fuliyaa. Gabadhii oo aad u cadhootay baad ku tidhi : Naa shaw bahal nacas ah baad tahay , oo aan abddo (faa’iido) lahayn , anna waxaan ku moodaayay inaad intaa dhaanto .
Iyada oo aan cadhoon ayaa waxay ugu jawaabtay : waayo miyaanay xoolihiisii ahayn ?
Gabadhii oo aad u cadhaysan ayaa hadana waxay weydiisay :Naa ma kaa dhab-baa iminka ?
Waxay ugu jawaabtay : horta saaxiibay lacagtii oo dhan inta aan ururiyay , ayaan baankaygii ku shubay (accoun -kaygii) , ka dibna (check) jeeg ayaan u qoray saygaygii (ninkaygii)oo magaciisii ku qoray iyo tiradii lacagta , jeegiina kafantiisii ayaan u geliyay , sidaasna dardaarankiisii waan sameeyay , ballan qaadkaygiina waan u fuliyay , bal hadaba isagu jeegga aakhiro ha ka sarifto .
Hadaba waxa iswaydiin leh , xukuumadda kulmiye ee shaqadoodu noqotay lacag urursi iyo dhac hantida dalka iyo dadka , ee weliba tartanka ugu jira , sidii ay wax u boobi lahaayeen oo qudha .
Bal xaggee bay wax u urursanayaan , ma akhiro ayay ganacsi kaga geli doonaan ? mise aakhiro ayay guryo kaga iibsanayaan ? mise waxay moodayaan in naarta jahanama lacag lagaga badbaado ? mise waxay moodayaan in janada lacag lagu iibsado ?
Hadaba ogow lacagta aad urursatay ee xaaraanta ah, aakhiro waxba kaaga tari mayso aan ahayd cadaabta oo lagu geliyo , ogowna aakhiro xisaab-baa taala .
Hadaba idinka oo aakhir-cimri taagan , maxaydun ilaahay la hortegi doontaan .
Ilaahayaw khaatumada ha na seejin . aaaamiin .
Ilaahayaw khaatumada khayr nooga dhig . aaaamiin
CALI BIIXI BIIXI <caliwwelli@hotmail.co.uk>
Previous articleMaxkamadaha Gobolka iyo Racfaanka Maroodi-jeex oo Sii daayey Rag eedo Musqmaasuq iyo dhac ugu xidhnaa Hargeysa
Next articleSHEEKO DHEX AMRTAY FIQI IYO MUUSE YALAXOOW